July 2, 2020 NEWS 8
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar laga helay ilo katirsan beesha Caalamka & Madaxtooyada Puntland ayaa daaha ka rogaya in uu jiro cadaadis xoog leh oo ay wakiilada caalamiga ah ku hayaan madaxweynayaasha dawlad gobaleedyada Jubbaland & Puntland oo ay ku cadaadinayaan ka qeybgalka kulanka madasha Amniga Qaranka ay ku yeelanayso magaalada Muqdisho ee caasumada dalka, taas oo markii horeba ay qeyb ka ahaayeen dalabkeeda.
Macluumaadka la helay, waxay sheegayaan in labada masuul-ba ay telfoon kula hadleen wakiilada caalamiga ah xubnaha ugu sareeya, gaar ahaana dawladda Mareykanka oo doonaysa in ay xubnahan qeyb kanoqdaan kulanka Muqdisho, isla markaasna ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyinka ee hadda taagan.
Puntland & Jubbaland, waxay muujiyeen saluug kuwajahan hanaanka loo maray sharciyada ay meelmariyeen baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya, waxayna doonayaan in gabi ahaanba laga laabto xeerarka la meelmariyey, laakiin caqabado badan ayaa ka hortaagan suuragalnimada qodobkaas.
In ay dhinacyada siyaasada oo ay ugu horeeyaan dawlad gobaleedyada iyo dawladda Faderaalka heshiis ka gaaraan nooca doorashada ee dalka ayaa ah mida ugu weyn ee ay sugayso Beesha Caalamka, marka la gaaro 10-ka bishan July, haddii aysan taasi dhicin waa caqabad kale oo halis badan.
Beesha Caalamka, waxay kaloo hoosta uga xariiqday madaxda labada maamul gobaleed in ay horey u dalbadeen is araga dawladda Faderaalka, oo ay marar badan ku eedeeyeen Madaxweyne Farmaajo in usan daacad ka aheyn wada hadal lays kugu yimaado, laakiin markii lagu dhawaaqay aysan ka baaqsan Karin.
2da maalmood ee nagu soo aadan ayay kala cadaan doonto in ay labada maamul-ba aqbalaan warka beesha Caalamka ama ay diidaan, waxase warar madax banaan ay sheegayaan in 2da Madaxweyne ay aadi doonaan magaalada Muqdisho, oo ay uga qeybgalayaan wada xaajoodyada xagga siyaasadda ah ee loo madlan yahay.
Sh Libaax wadani says:
Ma bilooday, waxii yaraa ee khakhlainta Pl laguugu soo dhiibay.Adeer Beel caalam iyadaa ku daashay farmaajo. oo filmkan ka danbaysa in ol iyo Jl diidaan shirka xamar. Waxana la rabaa in roadmap cusub loo sameeyo. Pl hadii ayrabo Garoowe ama Gaalkacyo ha lagu qabto bay odhan lahayd. Dawladan farmaajo waxa la ogaaday inaany Meelna difaaci karin, lacagtii uduunkana si khalad ah u isticmaashay. Ciidan meel xoraynkara bilaa AMISOM ma jiro. Markaa waxa laysla gartay in dalkan lagu celiyo ku meelgaadhkii
Adeer, Beel caalam PL maxaysiisaa. Ciidan mushahar uma siiso, Shabaab iyo Daacish kama difaacdo. PL iaydaaa isku tashatay, Bal ii sheeg waxa ay Pl siiyaan.
Wuxuu go,aan gaarey in uu Somaliya Gog ku rido, Farmaajio shir lala galo ama heshiis ma dhici karo, isagaana arrinta halkaas gaarsiiyey, mana aha nin Somaliya hogaamin kara. Puntland banaanka haka joogto arrimihiisa.
Arrinka wax kasta ka khatar badan haatan waxay tahay sidee Deni iyo Axmed Madoobe nafsadooda ugu aaminikaraan Farmaajo oo sumeeyey Raiisal wasaarihiisii.
Farmaajo waa nin qaba xanuunka dhimirka weyna ka suurgelikartaa in uu suubsho wax kasta dhibaato ah.
Sidas darteed waxaan kula talinayaa madaxda maamul goboleedyada si ammaankooda loo hubiyo in shirka lagu qabto Xarunta Xalane isla markaana ay maamusho beesha caalamka.
Waxaan shaki ku jirin crazy Farmaajo uu sii diyaarsadey suntii iyo qorshihii lagu khaarijinlahaa Deni iyo Axmed Madoobe iyo cid kasta isku dayda in ay ka hor istaagto Farmaajo in uu madaxweyne si ahaado.
Waa wax lawada filayey (sida aad u dhigteen) in beesha lixaad, oo awalba miiska fadhiday, ay ku soo biiraan ciyaaraha MAXALLIGA ah.
Inkastoona weli war rasmiyi ka soo bixin beesha lixaad, haddana sida aad soo xooraamiseen waa war aad u macquul ah. Haddaynu marka sideeda u qaadano, khasab bay ku noqonaysaa in Garoowe iyo Kismaanyo, ay ka qayb galaan shirka Muqdisha, iyaga oo weliba gorodda laalaadinaya.
Waxa ay u muuqataa in kooxda villadu ay ciyaarihii gudaha iyo dibedaba ku guulaysatay. Marnaba lagaama aqbali karo in aad tiraahdo garna waa leeyahay golihiinna ma rabo. Marnaba lagaama aqbali karo in aad tiraahdo waxa aan ahay xubin ka tirsan dawladda federaalka ah, isla mar ahaantaana ma oggoli gogosheeda, iyaga oo weliba imanayey gogosha aad adigu dhigto. Marna kaa gadmi mayso in aad shalay codsato in shir guud la isugu yimaaddo, oo aad maantana diiddo.
Aniga aragtidayda, laba arrimood baa Garoowe u furan; mid saddexaadi ma jidho. Waa tan koowaade, in ay shir degdeg ah ka yeeshaan arrinkan, oo ay yiraahdaan Soomaaliya waa ka tashannay kamana mid nihin federaalka, oo Muqdisha nalakama xukumo maanta kaddib. Waa tan labaade, in ay shirka ka qayb galaan, iyaga oo sanka laga haysto, lagu khasbay oo aan waxba ka beddeli karin; dhuumasho dhabarku muuqdo dhuumasho maaha.
Ciyaarta ay Villadu ciyaartay, waa ciyaar gudaha iyo dibeddeba ka iibsantay. Laakiin reer (TOLKEEY) Garoowe waxa aad mooddaa in hadda uu waagu ku baryey; Dhidar onkod kiciyay uun bay eegga noqdeen. Waar fashil siyaasadeed baad bartanka uga jirtaane wax idinka iibsamaya miiska soo saara niic looma baahna e. Wbt
Puntland waa ay cadeysey in inta uu Ismaqiiqe farmaajo uu Xamar ka taliyo aysan tageyn. Sababtoo ah waxaa loo arkaa inuu khatar ku ah midnimadda iyo Jiritaanka Somaliyeed. Laguna khaldamey oo uusan istaahilin xataa inuu biitooni. Waxaana intaa u dheer been, caqli xumo, dhaqan xumo iyo xishood darro. Sidaa darteed Puntland waxaa ka goan In markii ay Somali eriso ka ay dib ugu soo biirin saaxadda siyaasada ee Somalia.
Beesha caalamku way dhex-dhexaadin kartaa Xamar iyo Garoowe.Laakiin dhex-dhexaandinta waxaa ka horeeya in ay marka hore xamar ka noqoto 24tankii qodob ee ay Dastuurka ka badashay oo u wada badashay wax xamar kaliya dan u ah.Dhib iyo shidona ku puntlaan iyo reer puntlaanba.In ay xamar arimaha wadanka kala tashato madaxda maamul gobaleedyada.In Deeqaha uu adduun weynuhu ku bixiyo magaca soomaaliweeyn si xaq ah gobalkastaba loo siiyo saamigiisa.Arimahaas iyo ka sii badan bay puntlaan ka xanaaqday.Sida dhabtaa Ina farmaajo waa lagu qaldamay.Waxaana watay beelaha USC ayagoo is lahaa puntlaan buu baabi’inayaa.Sababtoo ah waagii hore ee uu 6-da bilood ahaa RW baan maqlay isagoo layf ku leh ma naqaan wax la yiraahdo puntlaan.Laakiin waxaan la xiriiraa Odayaasha iyo shacabka.Buug uu qorayna aad iyo aad buu ugu caayey puntlaan.
Calaa kulli xaal ninkaasu uma qalmo meeshuu maanta joogo.Insha Allaah waa dambena soomaaliya kama qaban doono xil dambe.
Beesha lixaad wax war ama cadaadis
Kama heyno ilaa iminka horta.puntland
iyo puntland waxay qaateen mawquf ah
Ineysan ku milmin jahawareerka siyaasada
Dalku wajahayo xiligan kala guurka uu hogaanka
Dalku hogaaminayo. Marka xalku isaga iska iman
Runtuna indhaaga hor iman, wixi xasilooni daro
Ah oo keento iskahorkeenka shacabka Soomaali
Waxa dusha u ridan cida talada loo igmaday oo
Ku fashilmay kuma xadgudbey hogaaminti iyo sharciga
Wadanka. Aragaani cida ay la dunto haadaanta laga
Joogi la’yahay iyo cida beesha lixaad wax u yeeriso.
Aad iyo aad baan ugu dhuun daloolaa waraka hoose
Iyo kuwa ku xeeran siyaasada Soomaalida gaar ahaan
Xiriirka UN iyo deeq bixiyaasha, marka bogan waa la socdaa
Qoraaladiisa iyo odoriskiisa iyo weliba xog yaraantiisa
Xitaa waxba kala socdo arimaha Puntland ee magaceeda
Ku indho buuxsado. Subxaanaka yaa cadiim